Mogadishu Journal » 2020 » August » 16
A presidential primary season like no other will culminate this week for the Democratic Party in the United States in an unprecedented, mostly digital convention that is set to cement Joe Biden as the official candidate tasked with taking on President Donald Trump in a...
Tens of thousands of opposition protesters have rallied in Belarus’s capital for the biggest demonstrations yet against the disputed re-election of President Alexander Lukashenko, even as the leader rejected calls to step down and hold fresh polls. In a defiant speech at a...
Muqdisho– Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah Golaha Shacabka isla markaasna ah Milkiilaha Hotel Elite ee Maanta la weeraray ayaa sheegay inuu ka badbaaday weerarkaas. Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa sheegay inuu ku sugnaa gudaha Hotelka markii uu weerarka...
Gedo:-Wararka ka imanaya Gobolka Gedo ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday kolonyo ay uu la socday wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre iyo xildhibaanno ka tirsan federaalka Soomaaliya. Kolonyada ayaa la sheegya in qaraxa miinada lagula eegtay degaanka lagu magacaabo...
Sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka, mudane Mahdi Maxamed Guuleed, ayaa xariga ka jaray Masawac laga hir geliyay magaalada Muqdisho oo loogu tala galay in maraakiibtu ay si fudud ugu soo hirtaan dekadda Muqdisho. Musawaca oo iftiinkiisa xilliyada habeenkii ay meel fog ka...
Muqdisho – Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulahi ayaa madaxweyne Farmaajo ku tilmaamay inuu jabiyay dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u taalla isagoo kala dhex baxay hadal jeedintiisii golaha shacabka kalfadhigiisii 7-aad. Cabdi Xaashi wuxuu madaxweynaha ku eedeeyay...